फिल्म – Pahilo Page
भारत । भारतको एक पाँचतारे होटलबाट प्रहरीले यौनधन्दाको भण्डाफोर गरेको छ । प्रहरीले राति तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ । यसमध्ये एक चलचित्र नायिका हुन् भने अर्की टेलिभिजन सिरियलमा काम गर्ने नायिका रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । प्रहरीले दिएको सूचनाका आधारमा प्रहरीको टास्क फोर्सले उनीहरुलाई पक्राउ गरेको बताइएको छ
दश अतिथिद्वारा चलचित्र लावाजुनीको पोष्टर सार्वजनिक
दाङ । नेपाल पत्रकार महासंघ दाङका पूर्वअध्यक्ष, गीतकार तथा साहित्यकार केएल पीडितको लेखन÷निर्देशन÷निर्माण रहेको चलचित्र “लावाजुनी”को फष्टलुक बुधवार सार्वजनिक गरिएको छ । थारु समुदायमा रहेको कमलरी प्रथालाई मुख्य विषयवस्तु बनाएर लावाजुनीको निर्माण गरिएको छ । घोराहीमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि मुक्त कमलरी विकास मञ्चकी पूर्व अध्यक्ष उर्मिला चौधरी,
रुचाइयो रुद्रप्रियामा रेखाको औंठी र आर्यनको रुमाल : २४ घण्टा नपुग्दै ३ लाख बढी दर्शक
काठमाडौं । नायिका रेखा थापाको बहुचर्चित आगामी चलचित्र “रुद्रप्रिया”को एउटा गीतमा रेखाको औंठी र आर्यन सिग्देलको रुमाल निकै रुचाइएको छ । हिजो बेलुकी सवा ४ बजे युट्युबमार्फत सार्वजनिक गरिएको “चिरबिर चिरबिर चाचारी” बोलको गीत २४ घण्टामा ३ लाख बढी दर्शकस्रोताले हेरिसकेका छन् । कार्तिक २ गते लक्ष्मीपूजाको दिन रिलिज गर्ने
छक्कापञ्जा– २ को “ए दाजु नसमाऊ” गीत सार्वजनिक, सुर्के थैलीलाई जित्ला ?
काठमाडौं । आगामी असोज ११ गतेदेखि प्रदर्शनको तयारीमा रहेको “छक्कापञ्जा– २”को एउटा गीत शुक्रवार रिलिज भएको छ । “ए दाजु नसमाऊ” बोलको गीत युट्युवमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो । चर्चित हाँस्यकलाकार दीपाश्री निरौलाले निर्देशन गरेको “छक्कापञ्जा”को “सुर्के थैली” युट्युवमा ढाई करोडभन्दा बढीपटक हेरिसकिएको छ । त्यस्तै “छक्कापञ्जा”कै अर्को गीत “पूर्वपश्चिम रेल”
राजनीति र कलाकारिताको दुई डुङ्गाबीच रेखाको रुद्रप्रिया
काठमाडौं । सक्रिय राजनीतिमा हाम्फालेर पुनः एकपटक चर्चामा रहेकी नायिका रेखा थापाले चलचित्र “रुद्रप्रिया” निर्माणको घोषणा गरेकी छन् । करीव डेढ दशकदेखि कलाकारिता क्षेत्रमा जम्दै आएकी रेखाले राजनीति र कलाकारिताको दुबै डुङ्गामा खुट्टा राख्दै “रुद्रप्रिया” निर्माणको घोषणा गरेकी छन् । नायिका थापाले राजनीति र कलाकारितालाई एकसाथ अगाडि बढाउने बताउँदै आएकी
नेपाली कथानक चलचित्र “पुरानो पुस्ता” मंसिरमा
तुलसीपुर । नेपाली कथानक चलचित्र “पुरानो पुस्ता” आगामी मंसिर ३ गतेबाट देशैभर प्रदर्शन हुने भएको छ । चलचित्र निर्माता समूहले आज तुलसीपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी यस्तो जानकारी गराएको हो । चलचित्र पत्रकार संघ दाङको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा चलचित्रका नायक बिराज बिष्टले राप्तीका रोल्पा र प्युठानमा पनि छायाङ्कन गरिएको चलचित्रमा एक
चलचित्र “पुरानो पुस्ता”को ट्रेलर र फस्टलुक सार्वजनिक
सल्यान । एक सय वर्ष पहिलेका नेपाली र नेपालको वास्तविक कथालाइ प्रस्तुत गरेर निर्माण गरिएको चलचित्र “पुरानो पुस्ता”को ट्रेलर र फस्टलुक सार्वजनिक गरिएको छ । आगामी मंसिर ३ गतेदेखि नेपालभर रिलिज हुने चलचित्र “पुरानो पुस्ता”को “हिजोसम्म तन्नेरी थेँ” बोलको गीत पनि सार्वजनिक गरिएको छ । फिल्ममा सय वर्ष पहिलेका नेपालीहरुले
मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम र समकालीन खगुलाल गुरुङले खेले फिल्म
प्यूठानको किसान आन्दोलनको इतिहास : ‘फागुन–२४’
प्यूठान । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल)का महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहद्धारा लिखित ऐतिहासिक ‘फिल्म’ ‘फाल्गुण–२४’ छायाकङ्न गरिएको छ । २०१० सालमा प्यूठानमा सञ्चालन भएको किसान आन्दोलनलाई लक्षित गर्दै तत्कालीन अवस्थामा किसानहरुमाथि गरिएको शोषण र आन्दोलनको उपलव्धिमा केन्द्रीत रहेको सिंहको कृतिमाथि फिल्म छायाङ्कन गरिएको हो । ‘फिल्म’का लेखक तथा तत्कालीन किसान आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता
“जय पर्शुराम”को रिलिज पुनरावेदन अदालतले रोक्यो
बिलखबन्दमा “जय पर्शुराम”को टिम
दाङ । पूर्वनिर्धारित रिलिज मिति मुखैमा आइपुग्दा “जय पर्शुराम”को प्रदर्शनमा पुनरावेदन अदालत ललितपुरले रोक लगाएको छ । यही साउन २८ गते रिलिज हुने तयारीमा रहेको नेपाली कथानक चलचित्र “जय पर्शुराम” रिलिज गर्न अदालतले रोक लगाएको हो । ब्ल्याक चिल्ली इन्टरटेनमेन्ट प्रालिका निर्देशक नवराज घिमिरेले “जय पर्शुराम” र चलचित्र निर्माता संघलाई
तिहारमा पलाँस फुलाउँदै फरक भूमिकामा सुपरस्टार रेखा
काठमाडौं । यसपालिको तिहारमा सुपरस्टार रेखा थापा पलाँस फुलाउँदै छिन् । आजै रिलिज भएको चलचित्रको टिजरमा तिहारताका दर्शकमाझ आउने “पलाँस”मा उनी आफ्ना पूर्ववर्ती चलचित्रहरुमा भन्दा भिन्न भूमिकामा देखिएकी छन् । तराई मधेसको परिवेशमा रेखा, अयुव अनि कामेश्वर फरक लुक्समा देखिएका छन् । पहिलोपटक रिलिज गरिएको टिजर सम्वादविहीन छ । कृषा
नायिका रेखा थापा फेरि निर्देशक
काठमाडौं । पिपलको विरुवालाई ढुङ्गामा फाले पनि ढुङ्गैमा उम्रिन्छ र आफ्नो अस्तित्व बचाउँछ र झाङ्गिएर भीमकाय रुख बन्छ । यो समयकी चर्चित र लोकप्रिय नायिका रेखा थापाको सन्दर्भमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ । अभिनय, गुणस्तर र चर्चा सबै दृष्टिले अब्बल नायिका रेखा थापा अब फेरि निर्देशक बन्ने भएकी छन्
काठमाडौं । चलचित्र “ब्रासलेट”को नयाँ गीत र प्रोमो सँगसँगै सार्वजनिक गरिएको छ । बुधबार चलचित्र बिकास बोर्डमा आयोजित एक कार्यक्रममा “अलि अलि पिउने बानी भो” खोइ माया गरेको ? भन्ने गीत तथा प्रोमो सार्वजनिक गरिएको हो । “खोई माया गरेको” बोलको गीतमा नायिका रजनी केसी र अभिनेता रमेश उप्रेतीमाथि फिल्माङ्कन
“ए मेरो हजुर–२”मा दाङकी याङ्सु श्रेष्ठ अनुबन्धित
दाङ । चर्चित नायिका झरना थापाले निर्माण गर्न थालेको चलचित्र “ए मेरो हजुर–२”मा दाङकी कलाकार याङ्सु श्रेष्ठ अनुबन्धित भएकी छन् । उक्त फिल्ममा अर्का चर्चित बालकलाकार अनुभव रेग्मीले पनि खेल्दैछन् । नायिका झरना थापा र सुनिल थापा निर्माता रहेको “ए मेरो हजुर–२”को निर्देशन पनि झरना स्वयंले गर्दैछिन् । आगामी साउनदेखि
चलचित्र “पर्शुराम”को फष्टलुक पोष्टर सार्वजनिक
दाङ । ब्ल्याक चिल्ली इन्टरटेनमेण्टको व्यानरमा निर्मित नेपाली कथानक चलचित्र “पर्शुराम”को फष्टलुक पोष्टर आइतवार राजधानी र दाङमा एकसाथ सार्वजनिक गरिएको छ । साउनको पहिलो वा दोस्रो साता देशभर एकसाथ रिलिज गर्ने तयारीमा रहेको ब्ल्याक चिल्ली इन्टरटेनमेण्टले एक कार्यक्रमको आयोजना गरी पोष्टर सार्वजनिक गरेको हो । चलचित्रका निर्माता महेन्द्र बुढाथोकीको अध्यक्षतामा
आक्रामक ओपनिङका साथ रेखाले जमाइन् देशभर एकाधिकार
रामप्यारी हेर्न उर्लियो जनसागर
काठमाडौं । रिलिज हुनुअघिदेखि नै निकै आक्रामक प्रचारप्रसारमा रहेको चर्चित नायिका रेखा थापाको “रामप्यारी”ले देशभर आक्रामक ओपनिङ गरेको छ । राजधानीका “रामप्यारी” लागेका हलहरुमा दर्शकहरु ओइरिएका छन् भने रामप्यारी चलेका देशभरका हलहरुमा पनि रामप्यारीले एकाधिकार जमाएको छ ।